Xaalada Nolosha Jasiiradda Nauru oo laga Dayriyay iyo 2 Qof oo Dab Isqabadsiiyay (VIDEO)
May 04, 2016 – Wasiirka Socdaalka iyo xuduudaha ee dalka Australia ayaa sheegay in gabadhii Soomaaliyeed ee shalay isku gubtay Jasiiradda Nauru ee dalka Australia loo soo qaadey Magaalada Brisbane, laguna dabiibaayo Isbitaalka magaaladaasi ku yaala.
Wasiirka ayaa sheegay in gabadhaasi Soomaaliyeed oo 21 jir ahayd ay dareentay in ay haysatay hal wado oo qura taasoo uu ku sheegay inay nafteeda haligto.
7-maalin ka hor ayay ahayd markii nin u dhashay dalka Iran oo ku sugnaa ila jasiiradaasi Nauru uu sidaan oo kale uu is gubay kadibna uu u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray dabkaasi.
Wasiirka ayaa wuxuu hay’adaha xuquuqda aadanaha iyo qaybaha kale ee bulshada uu ku eedeeyay inay iyagu dhiira-gelinayaan qaxootiga lagu haayo xeryaha ay Australia ka furtay Jazeeradaha Badwaynta Pacific-ga.
Wasiirka oo maanta ka hor hadlaayay Baarlamaanka, sidoo kalana shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Canberra, ayaa waxaa uu dhinacyadaasi uu ku eedeeyay inay qaxootiga ku boorinayaan inay nafsadahoodu haligaan, si Australia ay deganaansho uga helaan.
Wasiirka socdaalka Peter Dutton ayaa sheegay ka shakhsi ahaan inuu ka walaacsan yahay dadka qaxootiga ku dhiira-gelinaaya inay is haligaan, si uun loo keeno dalka Australia, sida uu yiri.
Wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in kuwa dhiira-geliya qaxootiga ay taageero u muujin karaan, balse haddii ay ku taageeraan wado naftaada halig ah, ay dhanka kale noqonayso arrin khatarteeda xambaarsan.
Dhanka kale wuxuu sheegay inaanay Dowladda Australia bedeli doonin qorshaheeda ku aadan qaxootiga sifaha aan sharciga ahayn ku imaanaaya dalkaasi Australia.
“Ma bedeli doono siyaasadeena ku aadan dadka sharci darrada ku soo gelaaya Australia, waxaana mudan in la cambaareeyo kuwa rajada gelinaaya qaxootiga.” Ayuu yiri wasiirka.
Ninkii Soomaaliga ahaa ee Weerarka ka Gaystay Dalka Australia oo la Toogtay (VIDEO) June 6, 2017
Hoyadii Dhashay Gabadhii Isku Gubtay Dalka Austrelia oo la Waraystay (VIDEO) May 26, 2016
DAAWO: iimaam Soomaali ah oo Sheegay Inuu Laga roone yahay (VIDEO) May 2, 2016